Kamba inofamba. Wongororo | Current Literature
Kamba inofamba. Ongorora
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 15/05/2022 17:35 | Updated on 15/05/2022 17:38 | Zviitiko, Noticias, Nhema nhema
Mapikicha echinyorwa: (c) Mariola DCA.
Ichangobva kusunungurwa kugadzirisa kuhwindo guru kubva mubhuku ra Benito Olmo, Turtle inofambisa, uye ndakaita rombo rakanaka kupinda preview neChina 12 mukupfuura nekuvapo kwemunyori. Olmo muverengi, ndakadya zvinyorwa zvake zviviri muvhiki imwe, iyi uye Nhamo yeZuva, achitarisa inspector Manuel Bianquette. Saka pandakaziva kuti vaizogadzira bhaisikopo ndakafara zvikuru, asi ndaityawo ndichifunga mashandisiro avanoita firimu rine manyorerwo mazhinji. Sezvineiwo nguva ino vabudirira. Ndinozvitaura.
1 The turtle maneuver - novel
2 The Turtle Maneuver - firimu
The turtle maneuver - novel
Iyo novel yemunyori kubva kuCádiz, ikozvino yakavakirwa kuMadrid, ndeye dema zita rekushandisa, ine clichés iyo vese vemhando yepamusoro vateveri verudzi vanotenda hongu kana hongu.
Ndinogara ndichitaura nezve3 C's: mhosva, nyaya uye charisma ye protagonist iyo, kana zvichibvira, inosanganawo nezvinodiwa zvepamutemo zvekuve we mashoko akanaka asi zviito zvinonzwika, enda nezvebhizinesi rako, kuva kwazvo kupwanyiwa uye, sechido chega chega, muviri mukuru uye wakasimba, kunyanya kana iine chinangwa uye ichitsanangurwa nenzira iyi nemunyori. Kuti Manuel Bianquette, ari mumwe wemhuka huru dzomusango idzodzo dzine mwoyo wakakura kudaro, murashwa aparadzwa nenjodzi uye anonwa doro rinopfuura rimwe chete, Ndakangokwanisa kubata deep fiber.
Kuti zvitonyanya kuipa, marongero enyaya dzavo ane denga re Cádiz, zvinoreva mazororo ezhizha muhuduku hwangu hwepakutanga uye imwe mwaka, pfupi asi yakasimba uye yakawanda gare gare, umo ndakabata chiteshi chayo parwendo runoverengeka semufambisi wechikepe. Asi iyo Cádiz yeBenito Olmo novel iri chero chinhu kunze kwehudiki, chiratidzo chinopfuura rima chenzanga yanhasi umo kusaenzana, the racismla chisimba uye kuora uye uori tsika munzvimbo dzose. Nekudaro, izvi zvichiri zvinhu zvepasirese munharaunda dzese.
Naizvozvo, iyo solvency mutsananguro yenzvimbo, nyaya, vatambi uye nzira yekurondedzera Olmo akaronga hoko yangu pasina mushonga uye akakwidziridza Manuel Bianquetti kuatari yangu yevaratidziri (uko kune vashoma kwazvo) vanoba moyo wangu, kwete zvinyorwa chete, kwemazana emakore.
Gore rapera Ndakabvunzurudza Benito futi Ndakataura naye uye ndakatora mukana uyu kuratidza kuyemura kwangu basa rake rakanaka. Iye zvino zvakare Ndakakwanisa kuchinjana maonero naye pachangu, kuti kusangana munjanji yepasi pevhu, mumotokari imwe chete uye panguva imwe chete iye zvino munzira inoenda kutarisiro yefirimu uye muguta rakaita seMadrid ine fungidziro yayo zvakare. Zvakanakisa ndizvozvo Ndakagutsikana zvikuru yezvavakaita nechisikwa chavo mubhaisikopo, kunyangwe ikabatwazve nemarezinesi akajairwa anotorwa kune hombe skrini.
Kune avo vedu vakaverenga novel, ndinofunga kuti zvakare uye zvechokwadi (uye wese anozviremekedza munyori angazvida) firimu rinokwanisa kukwezva vaverengi vatsva vakawanda vanoda kuziva zvirinani kana zvakadzama nhoroondo nevatambi vepakutanga. Ini hangu ndagutsikana nezvandaona nekuti inochengetedza hunyoro hwezvinyorwa.
The Turtle Maneuver - firimu
Inotungamirwa na Juan Miguel del Castillo uye nyeredzi Natalie de Molina y Fred Tatian, pamwe nechikoro chesekondari chakanakisa, chinotakura kubata kwe kushora kwevanhu uye kubvisa hana inova yemutungamiriri pachake. Asi kune avo vedu vasina kunyanya kupinda mubhaisikopo neshoko, iyo firimu inowana a kuenzana kwakanaka pakati pechikumbiro icho chiri pasi uye netsvina, yakasviba, ine mhirizhonga uye inosiririsa inopeta nyaya, yakanangana nevatambi vaviri.
hapana zvibvumirano uye ini handisi kubiridzira nekuti, kuve muverengi wenovhero kana kwete, iwe unonzwisisa zvese, kunyangwe magumo. Ndirwo ruzivo rwekuti, dai munyori asina kundiudza kuti yaive magumo ake ekutanga asi kuti akazochinja, angadai akandikanganisa zvakanyanya kana kuti angadai akaruramisa toni iyoyo zvakanyanya. kupomerwa pamusoro pedambudziko remhirizhonga yepabonde. Asi nemoyo wese, Ini ndinochengeta iyo yakazara kupfuura chikamu, kureva kuti, ndinosarudza hukama pakati pevatambi, ne mweya inorwadza yakagovaniswa nevatambi, ne kurasikirwa kwako, uye, munyaya yaCristina, mukoti akashungurudzwa neaichimbova shamwari yake, kubvuma kwake kunotyisa kwekupedzisira kuti, ndinoomerera, yaiva pfungwa yepakutanga nemunyori uye iyo yakakodzera mutungamiriri zvakakwana nokuda kwechikonzero chake.
Iniwo kugara nesarudzo ye silence iyo inonyanya mufirimu. Pasina kana mimhanzi muzvikamu zvishoma, zvinosarudzwa kuti kunyarara uku kunoratidzawo kushushikana, kutya uye kurwadziwa, zvinotsigirwa ne magnificent expressiveness yevatambi vakuru vaviri.
Saka, Natalia de Molina anofamba nemufananidzo wake waCristina. Inguva shoma dzine kutya kwakashata uye kusagona kufema kwakanyanya kwakaratidzwa zvakanyanya. Hunhu hwekunyora, zvirinani mundangariro dzangu, hahuna kuratidzika kunge hwaityisa kwandiri asi hwakasimba uye hwakanyanya kurwa, asi iyo cinematographic haikanganisi zvachose.
Asi semaonero angu the roundest hit ndiko kuwana Fred Tatian, mutambi asingazivikanwi uye, naizvozvo, pasina kukwanisa kumubatanidza nechinhu chipi nechipi, kupa Manuel Bianquetti nyama nemapfupa, nokuti ivo ndivo chaizvoizvo vanyori.
Bianquetti ari chipfukuto chizere nehasha uye kurwadziwa kwakadzika nekuda kwekufirwa kunoshamisa kwemwanasikana, kwaakafirwawo nemukadzi wake nemumwe mwanasikana mudiki, akapinda mudambudziko rakawanda, asisafarirwe nebasa rake kuMadrid uye akaguma. akadzingwa mugomba mukamuri yepasi pemapurisa eCádiz. Ikoko anotungamira kurarama ari oga achikweva mhosva uye kusuwa uye akaparadzaniswa nemunhu wese uye nemunhu wese. asi pane chido chekuda kururamisira uye ruregerero zvisinei nemhedzisiro, uye kufunga kuti kurwadziwa kamwe uye zvachose.
Musiyano neiyo yekunyora Bianquetti ndeye chete matauriro acho, sezvo ane mavambo ekuItaly, uye mufirimu vanotora mukana werudzi rwaTatien kuti vawedzere mavambo iwayo. Kana iyo yakawedzerwa kune iyo zvekunyama kuisa uye izvo zvisingaite vatambi vakawanda zvinobudirira, izvo fambisa manzwiro chete nechitarisiko kana huvepo, dudziro yacho inokatyamadza.
Saka izvo ukama pakati pavo inoratidzwawo nemusiyano iwoyo pakati pemafizikisi, the kushaya simba mupfungwa vanogovana uye simba nedziviriro izvo zvaanoda uye kuda kwake kugadzirisa mhosva uye kukundikana kwehurongwa hwekutonga izvo zvinobvumira kusaruramisira kwakawanda.
Asi isu tinofanirwa kusimudzira ratidziro yese kufanana nevatambi veLatino vanotamba mhuri yemudiki akapondwa, kana vamwe vakakuvadzwa, senge Gerard de Pablosaka louis vines.
Kutaurwa kwakasiyana kwakave Mona Martinez semudiwa waBianquetti muimba yepasi uye kuti mune zvinyorwa zvepakutanga mudiwa. Martinez inokwana zvakakwana zvemurume uya Morgado. Uye hongu, Benito akanga akarurama paakataura pamusoro payo pamagumo efirimu: yakanaka kune basa rayo rekuvaka rakanaka uye replicas yehutano hwaBianquetti. Zvese zviitiko zvavanogovana ndizvo zvakanakisa, nazvo bittersweet counterpoint kune mavara evaviri. Uyezve, munhu anogona kuda kutaura kuti inotovandudza zvinyorwa neizvozvo cinematic sex change kuti vakakupa.
Kuti zvese zvinoshanda: nhandaro yenzvimbo dzakashata uye dzine njodzi, nehutsinye hwayo uye hukasha, kana mhirizhonga isina hafu zviyero kana tsitsi. Ndiro rima iro rinomira kunze uye rinopinda mufirimu rose uye ndizvo zvakakosha, nekuti ndiyo musimboti weinoveli..
Saka, inokurudzirwa zvakanyanya kune vaverengi vaviri veBianquetti novhero. Ndakatomirira kugadziriswa kwechipiri. Uye zvechokwadi zita rechitatu, iro randinoziva ruoko rwekutanga rakagadzirira hafu. Uye kune vasiri vaverengi nekuti zvakakodzera kuwana zvinyorwa zvinyorwa kana iwe wakataurirwa zvakanaka iyi nyaya yekutanga mubhaisikopo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Nhema nhema » Kamba inofamba. Ongorora
Mienzaniso ye eclogue
Antonio Florez Lage. Hurukuro nemunyori weBlind hook